Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukubambisa » IDisney Cruise Line iyabavala abantwana abangagonywanga
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Ukubambisa • Culinary • inkcubeko • ukonwatyiswa • Imiboniso bhanya bhanya • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeLuxury • umculo • iindaba • abantu • Resorts • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
IDisney Cruise Line iyabavala abantwana abangagonywanga.
Imithetho emitsha iya kuba yimfuneko kubo bobabini abakhweli base-US nabamazwe ngamazwe, ngokufanelekileyo ukuthintela abantwana abavela kumazwe angagonyi abantwana abancinci kakhulu.
Iimfuno ezihlaziyiweyo zogonyo lwe-COVID-19 zabhengezwa nguDisney namhlanje.
Imigaqo entsha yokugonya ye-Disney Cruise Line ye-COVID-19 iya kuqala ukusebenza nge-13 kaJanuwari ka-2022.
Abantu abangakulungelanga ugonyo ngenxa yobudala kuya kufuneka babonelele ngobungqina beziphumo zovavanyo lwe-COVID-19 ezithathwe phakathi kweentsuku ezi-3 kunye neeyure ezingama-24 phambi komhla wokuhamba ngesikhephe.
I-Disney Cruise Line ibhengeze iimfuno zayo ezintsha zogonyo lwe-COVID-19 kunye nokwandiswa okukhulu kwesigunyaziso sayo sokugonya namhlanje.
Ukucaphula izikhokelo zokugonya zase-US, ezisanda kwandiswa ukubandakanya abaneminyaka emihlanu ubudala, Umzila weDisney Cruise uthe abantwana abaneminyaka emihlanu kuya kufuneka ukuba bagonyelwe intsholongwane ye-COVID-19 ukuze bakwazi ukukhwela iinqanawa zabo zokuhamba ngenqanawa.
UDisney, umzila wokuqala wokuhamba ngenqanawa ofuna i-jabs yabantwana, kwaye wathi iimfuno ezintsha ziya kuqala ukusebenza ukuqala nge-13 kaJanuwari 2022.
"Njengoko siphinda sihamba ngomkhumbi, impilo kunye nokhuseleko lweeNdwendwe zethu, amaLungu eCast kunye namaLungu eCrew yeyona nto iphambili," utshilo uDisney kwingxelo. "Ujoliso lwethu luhlala lusebenza kwiinqanawa zethu ngendlela enoxanduva eqhubeka nokwenza umlingo kubo bonke abakhweleyo."
Abantu abangakulungelanga ugonyo ngenxa yobudala kuya kufuneka babonelele "ngobungqina beziphumo zovavanyo lwe-COVID-19 ezithathwe phakathi kweentsuku ezi-3 kunye neeyure ezingama-24 ngaphambi komhla wokuhamba ngesikhephe."
Umzila weDisney Cruise ilumkise ukuba iimvavanyo ze-antigen azamkelwa kwaye uvavanyo kufuneka lube luvavanyo lwe-NAAT, uvavanyo lwe-PCR olukhawulezayo okanye uvavanyo lwe-PCR olusekwe elebhu.
I-cruise line licandelo lokuqala le Inkampani yeDisney ukufuna ugonyo kubaxumi. Okwangoku, iipaki zomxholo weDisney azinazo naziphi na iimfuno zokugonywa kwe-COVID-19 kubakhenkethi. Nangona kunjalo, bonke abasebenzi baseMelika kwezo ndawo kufuneka bagonyelwe i-coronavirus.
Iinqanawa zokuhamba ngenqanawa ziye zaba ziindawo ezixhaphakileyo ze-COVID-19 kwiinyanga zokuqala zobhubhani we-coronavirus, abakhweli kunye nabasebenzi bosulelwa sesi sifo kwindawo evalelweyo yeenqanawa zaselwandle.
Lo bhubhani ulichaphazele kakhulu ishishini lokuhamba ngenqanawa, kunye neentambo ezininzi zihamba ngenxa yempembelelo ye-COVID-19 kunye nezithintelo ezibekelwe ukuhamba kwihlabathi liphela.